Itinyekwu Hacks Russell - Foneelu Of The Day
Ihe mbụ ị ga-amụta banyere Funnels na 2018 bụ na Russell Bronson bụ ndị kasị ewu ewu ọkachamara na isiokwu ụbọchị ndị a na ọ bụ ihe niile n'elu ebe.
Nke a abụghị dakọnyere adakọnye, a na-adịghị otuto ahịa.
The nwoke maara otú aka funnels iji usoro ziri ezi ụzọ na n'ezie na-arụ ọrụ.
google elu "Itinyekwu Hacks Russell" na ị ga-eduga ya free ọzụzụ webinar ebe ọ na-akọwa otú o si n'ebe-achịkọta a lousy paycheck ime goro ọrụ na-emepe emepe a niche foneelu na-eme ka ya na-akpata $18,000 a ụbọchị.
Nke a Ihọd adịghị aga gburugburu ohia, ọ na-na-ere a n'elu mma ngwaahịa na ọ na-eme ka ya ego na ọ bụ njikere ịkọrọ ya na nzuzo na-onye ọ bụla nke dị njikere ịrụsi ọrụ ike iji na-nna ukwu nke aka ya aka.